iWork, iMovie ary iPhoto maimaim-poana, ny fomba fampidinana azy io nefa tsy mandoa | Vaovao IPhone
iWork, iMovie ary iPhoto maimaim-poana, ny lakileny amin'ny fampidinana azy io nefa tsy mandoa
Nandritra ny fehezan-teny ho an'ny fampisehoana ireo iPhone 5 dia nahalala ny vaovao izahay fa ny suite an'ny birao Miasa aho voaforon'ny Pejy, Nomery ary Keynote dia ho maimaim-poana saingy araka ny aseho amin'ny fampisehoana, ny fitaovana ihany azo tamin'ny 1 septambra afaka nanararaotra an'io tolotra io ry zareo.
Ity no lakilen'ny fahafahanao misintona ireo pejy, isa na keynote maimaim-poana. Tsy misy fitaka hafa ary tsy mendrika ny hamerenana amin'ny laoniny ny fitaovana iOS mba hahazoantsika ny tolotra. Apple dia hahita ny datin'ny fampahavitrihana voalohany ary hahita raha mifanaraka amin'ny fepetra napetrak'izy ireo ny iPhone, iPad na iPod Touch.
Raha iray amin'ireo namoaka fitaovana iOS tamin'ny 1 septambra ianao, taorian'ny fametrahana ny iOS 7 sy ny fidirana amin'ny App Store dia ho hitanao fa manana safidy hisintona ireo rindranasa izay ao anatin'ny iWork ianao maimaim-poana ary koa, azonao atao koa izany mahazo iMovie sy iPhoto tsy mandoa. Fanentanana iray hafa hisarihana mpanjifa vaovao miaraka amin'ireo fampiharana tsara indrindra ao amin'ny magazay.
Inona avy ireo "fikafika" hahazoana ny fangatahana maimaimpoana raha tsy mahafeno ny fepetra takiana isika? Tsy dia misy firy fa misy safidy azontsika atao. Ohatra, raha ao amin'ny SAT ny fitaovan'ny iOS, rehefa mahazo isika nohavaozina dia hahamarika azy ho "vaovao" ary hahafahantsika misintona ireo fampiharana ireo.
Afaka manao izany koa isika mangataha famindram-po amin'ny namana tompon'ny fitaovana mifanaraka amin'ny daty fampiatoana, fidirana amin'ny Apple ID ary ampidino ireo rindranasa. Amin'izany dia hataontsika mifandray amin'ny kaontintsika izy ireo ary azontsika atao izao ny misintona azy amin'ny iPhone, iPod Touch na iPad.
Mandritra izany fotoana izany, ho an'ireo mpampiasa iMovie, iPhoto, pejy, isa ary mpampiasa Keynote hafa mbola mitovy ihany ny vidiny noho ny teo aloha. Tsy misy dikany ihany koa ny fanohizana famandrihana ho an'ny fampiharana amin'ny fanitsiana antontan-taratasy, fampisehoana ary takelaka rehefa amin'ny alàlan'ny tontonana iCloud.com no ahafahantsika miditra malalaka amin'ny ankamaroan'ny safidiny.
Fanazavana fanampiny - IOS 7 Rohy fampidinana mivantana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » iWork, iMovie ary iPhoto maimaim-poana, ny lakileny amin'ny fampidinana azy io nefa tsy mandoa
Inona izany SAT izany?
Crawworth dia hoy izy:
Araka ny azoko dia ny serivisy teknika, arahaba.
Valiny amin'i Crawworth
Izany indrindra dia ny serivisy teknika.
Alejandro Velasquez dia hoy izy:
salama, misy fomba hamahana izany olana izany? Nividy 5s aho talohan'ny omaly ary tsy namela ahy hisintona na iphoto na imovie, ary ny iwork raha mamela ahy! Tsy haiko ny antony, misaotra anao aho
Valiny tamin'i Alejandro Velásquez
Onuba dia hoy izy:
Serivisy fanampiana ara-teknika (SAT)
Mamaly an'i Onuba
Na azonao atao ny maka ny iPhone 5s na 5c an'ny namanao iray, alaina amin'ny kaontinao izany ary avereno amin'ny findainao ny fividianana. Tsisy fisaorana.
Azo atao ny miditra amin'ny fitaovana vaovao, ary rehefa misintona azy amin'ny iD, azontsika atao ve ny misintona azy amin'ny fitaovana hafa? Ankehitriny mijanona amin'ny ID-nay ny fampiharana!
Eny, azo atao toy izany koa
Eny, nividy mini iPad tamin'ny 4 septambra aho, navadika ho an'io andro io ihany, ny andro omaly omaly izay nanavao ny iOS 7 ary voaloa ireo rindranasa ireo. Tsy misy fomba fampidinana azy ireo maimaim-poana.
Mitovy amin'ny mini iPad iray hafa aho, efa hiantso an'i Apple aho
Kôdeksa dia hoy izy:
ary raha misoratra anarana any amin'ny firenena hafa ianao fa mbola tsy niaraka tamin'ny karatra vaovao hafa? afaka ve?
Valio amin'i CoDeX
Tsy miankina amin'ny Apple ID izy io, miankina amin'ny UDID an'ny fitaovana ary tamin'ny fotoana voalohany nanetsehana azy.
Fa maninona ity lahatsoratra ity no antsoina hoe "lakilen'ny fampidinana azy nefa tsy andoavam-bola"?
Noho ny antony tsotra tsy ahafantaran'ny mpampiasa maro ny "lakile hampidinana azy io nefa tsy andoavam-bola" taorian'ny nanambaràn'ny keynote fa maimaimpoana ho an'ny iPhone, iPad ary iPod Touch rehetra miaraka amin'ny iOS 7 izy io.
Mikasika ny fanazavana ny "lakile" na fepetra takiana amin'ny fisintomana ireo rindranasa ireo nefa tsy mandoa.
Nacho, nahavita nampidina azy ireo maimaim-poana ve ianao? satria tsy mahay aho ary mahafeno ny fepetra takiana.
Tsy mahafeno ny fepetra takiana aho, na izany aza, hitako tamin'ny forum amerikana fa misy olona maro toa anao. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy vahaolana hafa ankoatry ny miandry na miantso an'i Apple (manana ny telefaona amin'ny Internet ianao) hahazoana ny vahaolana.
Fihaonambe amerikana? Kanadiana, Meksikana, Hondurans, na Kolombiana?
Tsy Etazonia i Etazonia.
Tsotra izy io, mba hisarihana mpitsidika. Raha tena te-hanazava zavatra amin'ny mpampiasa clueless ianao fa tsy "iWork, iMovie ary iPhoto maimaim-poana, ny lakilen'ny fomba fampidinana azy io nefa tsy andoavam-bola" dia manana ny lohateny hoe "takiana ilaina amin'ny fampidinana iWork, iMovie ary iPhoto", saingy izany mpampiasa tsy eo ihany no mora mandrisika hamorona fitsidihana.
"Ny fepetra takiana amin'ny fisintomana iWork, iMovie ary iPhoto" dia tsy mitombina satria tsy milaza ianao fa azo sintonina maimaim-poana, zavatra izay nambaran'i Apple fa azo atao amin'ny fahatongavan'i iOS 7.
Tsy haiko hoe maninona ianao no tsy maintsy mitady antony sy fehin-kevitra amin'ny zavatra rehetra ataontsika, dia tsotra kokoa izany. Tsy mitady hisarika mpitsidika aho fa mitady hanampy ary raha misy manandrana misintona iWork maimaimpoana ary tsy mahalala ny antony tsy azon'izy ireo atao dia manandrana manampy maivana ity lahatsoratra ity.
Marina ny anao, ny hadisoako. Ny famerenana indray ny lohateny dia mila fanovana be dia be, toy izao:
"Ny fepetra takiana amin'ny fisintomana iWork, iMovie ary iPhoto maimaim-poana"
Ary tsy mitovy amin'ny anaram-boninahitro izany fa raha tokony ho maimaim-poana dia nampiasa ny fomba fiteny hoe "tsy mandoa vola" aho? ...
Djaffard dia hoy izy:
Manontany ihany koa aho fa ny lohatenin'ny lahatsoratra dia tsy mifanaraka amin'izay nosoratanao - aotra ,,,,,
Valiny tamin'i Djaffard
Angelo Patricio Figueroa Alegr dia hoy izy:
iWork dia mendrika isaky ny denaria; )
Valiny tamin'i Angelo Patricio Figueroa Alegr
Jimm-y Ramirez dia hoy izy:
Vonona, ary misaotra ny vaovao, alaina avy amin'ny ipad mini ny iwork rehetra, ny apps hafa dia efa nanana azy ireo. Salu2.
Zava-misy. Ampandehano ny ipad mini-ko amin'ny USA cta
Valio amin'i Jimm-y Ramirez
Salama, avelao aho hisintona azy ireo ao amin'ny kaontinao azafady 😘
BorjaSP dia hoy izy:
Nanova ny iPhone-ko omaly izy ireo ary mandoa ahy ...
Mamaly an'i BorjaSP
Misy fomba iray hafa koa izay tsy nasehon'izy ireo! Ary raha manana backup efa vita ao amin'ny iTunes ianao, ny iray amin'izao fotoana izao dia manohy toy ny hoe tsy misy zavatra hafa, ny azonao atao dia ny famafana ankapobeny avy amin'ny iPhone anao ary rehefa manomboka manao ny fikirana voalohany ianao rehefa manontany anao izy ireo raha tianao avereno amin'ny iCloud na iTunes backup na configure ho vaovao ny safidy tokony apetrakao dia ny manamboatra toy ny fitaovana vaovao ary manandrana manao azy manana Internet misy ary apetrakao ny apple apple anao ary voila dia hanome anao hanavao ireo fampiharana rehetra ireo Sitrapoko no nataoko ary mandeha tsara aho.
Lluis Curto dia hoy izy:
Saingy nilaza izy ireo fa ho hitan'ny Apple ny datin'ny fampandehanana voalohany ilay fitaovana ary tsy hiseho ilay tolotra, na dia averinao ho vaovao ihany aza. Azo antoka izany fa mandeha alohan'ny mamafa ny zava-drehetra.
Valiny tamin'i Lluis Curto
Salama ! Avy any Arzantina aho. Nohavaozina ho ios7 aho ary tsy mahazo fidirana maimaimpoana mankany Imovie, na Iphoto na izay nanambara fa afaka izy ireo aorian'ny 1 septambra.
Salama, avy any Mexico aho ary vao nividy solosaina OSX kinova 10.9.2 ary nieritreritra fa nanana ilay iphoto tafiditra ary tsy manana, mila mividy azy ve aho? Ary raha noho izy ireo nanoro ahy ahy ambanin'izany sa mividy iray hafa izay tsara kokoa aho?
markoz dia hoy izy:
Ka efa niady tamin'io aho 🙁 Manana ny iPhone 4S ahy hatramin'ny 12 septambra 2012 aho
Mamaly an'i markoz